Olo olaha uruurinta taakuleenta 2012/Turjumid/Fariinta mahad celinta - Meta
Olo olaha uruurinta taakuleenta 2012/Turjumid/Fariinta mahad celinta
Mudane [given name]
Waad ku mahadsantahay kaalmada aad ugu deeqday Mu'asasada Wikimedia. waxaa tahay qof wanaagsan!
Way kuu fududahay inaad iska iloowdo olo olaha uruurinta kaalmada, waan ku faraxsanahay inaadan samaynin taa. Qaabkaas ayeey wikimedia iskaga bixinaysaa biilasha --- dad sidaada oo kale ah ayaa nasiiya lacagta, si uu bogga unoqdo mid xora bilaashna ah una suuroowda dadka aduunak jooga oo dhan.
Dadka qaar waxay leeyihiin waxaan ku kaalmeenay lacagtaan Wikipedia maxaa yeelay waxay arkeen in ay faaiido leedahay, wayna ku kalsoon yihiin saas ay tahay mid aan dhamaystirneen, waxay ogyihiin in iyaga loo qoray. Wikipedia looma samayn in ay taageerto wakaaladaha shaqada ama ay gadaal ka riixdo fikrado gaar ah, ama raadinta ku raali gelinta waxyaaba ayna aaminsaneen in ay rumeeyaan. Hadafkeeni waxa uu yahay waxa dhabta ah, waana samayn karnaa adiga daraadaa. Run ahaantii howshaada ah maal galinta bogga waxay ka digeysaa inaan xor ahaano waxaana sii wadi karnaa shaqadayna taasoo ah soo bandhigista waxa aan dooneeyno ugana baahanahay Wikipedia. Waana sida loo baahanyahay in ay sii ahaato.
Xususnoow: waxa aad bixisay xitaa ma dabooli karaan masaariiftaada. Isku celceliska kaalmada waxay dobooleeysaa adeegsigaada xitaa adeegsiga malaayiin kale ee wikipedia. Kaalmadaada waxay Wikipedia ka dhigaysaa meel ay caruurta Bangalore isku baraan iskood borogaraaminta combiyuuterka. Da'da dhexdhexaadka ah qof guri-joogta ah ee ku nool Fiyeenna ee la nool cuduka Parkinson. Qof qoraa ah ee doonaya in uu wax ka barto ingriiska 1850. Wiil yer oo 10 jira ee u dhashay Salvador oo helay Carl Sagan.
Ka wakiil ahaansho dadkaas, iyo nus Bilyan kale oo dad ayaa ah kuwa aqriya Wikipedia Iyo mashaariicda la bahda ah, waad ku mahadsan tihiin kasoo qayb galka aad nalaga soo qayb gasheen dadaalkaan si loo soo uruuriyo aqoon binaadanimo ah una furan dadka oo idil. Macaawinadaada waxay aduunka kadhigaysaa meel wanaagsan. Waad mahadsan tihiin.
In badan oo dadka kamid ah ma oga in ay ahayn wikipedia mid dhaqaala doon ah. Fadlan isku dar anaad ku xiriiriso e-mail kaan qaybo ka mid ah saxaabtaada si aad ugu dhiiri geliso ina kaalmo ka gaystaan. Hadii aadba tahay mid usoo xaytay, waxaad isku dayi kartaa inaad waxa ku kordhido Wikipedia. Hadii aad aragto qoraal ama wax kaloo yer oo qalad ah, fadlan sax, hadii ay jiraan wax la halmaamay, fadlan ku dar. Haka welwelin inaad qalad sameeyso: waa arin iska caadi ah qofka marka ugu horaysa wax bedelka, Wikipediaha ayaa sixi doona.
Waa tix galinayaa kalsoonidiina, waxaana idinka balan qaadayaa lacagtiina in loogu adeegi doono si wanaagsan.
Waxaad nagala socon kartaa barta [#twitter Twitter], [#identica identi.ca] ama [#google Google+], hadii ay ku cajab galiyeen [#facebook Facebook] iyo [#blog aqri qaybteena]. Halkani waa [#annual Xog waranka Mu'asasada Wikimedia sanadihii 2010-11], [#plan Qorshaha Mu'asasada Wikimedia sanadihii 2012-13] iyo [#strategic Qorshahii istaraatiijiyada Mu'asasada Wikimedia shantii sano]. Sidoo kale waxaad wikipedia ka iibsan kartaa wax yaabihii ay soo saartay [#shop shop.wikimedia.org].
Heerkaada: Kaalmadaadu waa [date] [amount].
Dooqada inaadan ka qayb gelin: Waxaan rajaynaynaa in ay sii joogaa maalgeliye yaasheena si loo tuso dhaqdhaqaaqa mujtamaceena iyo dhaqdhaqaaqa dhamaan deeq bixiyeyaasha. Hadii aad door bideysid in uusan kuu imaan wax e-mail ah, fadlan guji batoonkaan hoose waana kaa tirtireynaa liisaka:
[#unsubscribe Iga jooji]
Waxaa sruura gal ah fariintaan in ay ka dhigto deeqdaada heer. Ma wanaagsan ama waxba sooma kordhin, qayb kamid ah, ka qayb qaadashadaan. Mu'asasada Wikimedia, Inc. waa shirkada sama fal ah oo aan ahayn dhaqaale doo kani waa 501(c)(3) canshuur dhaafka Maraykanka. ee ciwaankeena 149 New Montgomery, dhismaha 3rd, San Francisco, CA, 94105. U.S. tirada canshuur dhaafka: 20-0049703
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Fundraising_2012/Translation/Thank_you_letter/so&oldid=18122290"